Ungazithumela njani ii-Gifs kwi-Twitter | Iindaba zeGajethi
Ungazithumela njani ii-Gifs kwi-Twitter
Abathandi benethiwekhi yoluntu iTwitter banethamsanqa: iqonga ekugqibeleni ivumela ukupapasha ii-gifs zoopopayi kwiiTweets zabasebenzisi. Ezi ziindaba ezimnandi, iindaba ezimbi kukuba azidlali ngokuzenzekelayo, eziza kusinyanzela ukuba sizityhile sizicofe kuzo ukuze sizilayishe. Ngale ndlela i-Twitter ifuna amaxesha okulayishwa ngokukhawuleza, kodwa ke ii-gifs zinokuphulukana nentsingiselo.
Ukuba ungumthandi wolu hlobo imifanekiso eguqukayo, sikuxelela ukuba uzipapasha njani kwifayile yakho ye- iitweets. La ngamanyathelo ekufuneka elandelwe:
Fumana i-gif ofuna ukuyisebenzisa kwi-tweet yakho ngeGoogle okanye kwelinye iqonga, okanye uzenzele ngokwakho ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni ngalo msebenzi. IGIFBoom yenye yazo.
Amanye amanyathelo aya kuqheleka kuwe: yiya nje kwiakhawunti yakho ye-Twitter, lungisa i-tweet yakho kwaye uncamathisele umfanekiso kwifomathi ".gif" oyifunayo. Iya kuba ilungile, kodwa kuya kufuneka uthathele ingqalelo uthotho lweengxaki kunye nokuhambelana kwale fomathi intsha.
Zonke ii-Gif ziyasebenza kwaye "ziyajongwa" ukusuka iwebhu Twitter.com kunye nokusetyenziswa ngokusemthethweni kwenethiwekhi yentlalo yezixhobo ze-Android kunye ne-iOS ezivela kuApple. Nangona kunjalo, usetyenziso aluyi kukuvumela ukuba ungeze ii-gifs ezisebenzayo kwii-tweets zakho (ezi zinokulayishwa kuphela kuhlobo lwesikhangeli). Okwangoku, ii-gifs azisebenzi kwiipilisi.
Siyathemba ukuba esi sifundo siluncedo kuwe ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ungazithumela njani ii-Gifs kwi-Twitter
UMirella vasquez ullo sitsho
Uyilayisha njani i-gil kwi-twiter
Phendula Mirella vasquez ullo
Khulisa ubumfihlo bethu kwiWindows ngeDNSCrypt
Ungasicoca njani indawo kwi-iPad ngokulula